Isgaarsiinta NISA oo Hawada Laga Saaray, kadib markii laga warhelay in Alshabaab ay dhagaystaan. – Hornafrik Media Network
Isgaarsiinta NISA oo Hawada Laga Saaray, kadib markii laga warhelay in Alshabaab ay dhagaystaan.
Isgaarsiinta Halow Halow-da loo yaqaan ee ay isticmaalaan Ciidanka Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba hawadda Laga saaray Maanta, kadib markii laga warhelay inay dhinacooda ka isticmaalaan Kooxda Alshabaab.
Sirdoonka Maraykanka ee Fadhigiisu yahay Xalane ayaa soo gudbiyay in Isgaarsiin laga bixiyay Nabadsugidda ay u gacan gashay Kooxda Alshabaab, ayna si toos ah u dhagaystaan Isgaarsiinta Ciidanka, Waxaana ay sheegeen in arrintan ay dhici karto inay ku lug leeyihiin Madax sare oo ka tirsan Sirdoonka Somalia.
HornAfrik ayaa aragtay Qoraal arrintan la xiriira oo loo gudbiyay Taliska Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, balse uu iska indha tiray Ku Simaha Taliyaha NISA, Col Jaamac. Waxaana ay taasi sababtay in Shalay ay arrintaasi la wadaagaan Sirdoon Caalamiya Wasiirka Amniga oo aanba ka war hayn xogta Nabadsugidda Somalia la siiyay Usbuuc ka hor, taasoo ay iska indha tirtay. Waxaana uu Wasiirku isla shalayba amray in Hawadda laga saaro Isgaarsiinta NISA, lana amro in dib loo soo xareeyo, si loo ogaado Tiradda la hayo, dib loo eego Tiradda ka baxday Xafiiska Hogaanka Isgaarsiinta.
Maanta ayaa si rasmi ah looga saaray Hawadda Isgaarsiinta Ciidamadda NISA, iyadoona lagu amray Hogaanka Isgaarsiinta inuu badalo Frequency-ga ama Numberka ay isticmaalaan, iyadoona aan wax baaris lagu samayn tiradda Isgaarsiinta maqan ee aan la ogayn halka ay ku maqan tahay.
Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed oo dib u soo kabanaysay tan iyo markii dib loo dhidbay Burburkii kadib ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ay awood badan ku dhex yeesheen Horjoogayaal ka soo goostay Kooxda Alshabaab, taasoo abuurtay hoos u dhac xooggan oo soo wajahay Howlaha Sirdoonka Somalia.
Ku Simaha Taliyaha Nisa, Jaamac oo ah hadda ninka ugu sareeya Hay’adda waxa uu ka mid ahaa Illaaladii Hogaamiye Xigeenkii hore ee Alshabaab, Aadan Xaashi Cayroow oo ay Maraykanku ku dileen Dhuusamareeb, Taliyaha Hogaanka Sirdoonka Hay’adda, Zakariye waxa uu isla xilkan uu ka hayo Nabadsugidda uu ka hayay Kooxda Alshabaab ka hor intii uusan isku soo dhiibin Dowladda Somalia, Waxaa sidoo kale inta badan Xafiisyadda ka howlgala dhalinyaro ka soo goosatay Alshabaab, iyadoo Saraakiishii hore ee Sirdoonka Somalia laga dhigay Howlgab.